Igumbi lokulala labucala phakathi kweNdalo
IHomestay yethu yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwabo bathanda izityalo, abathandi bezilwanyana, abathandi bendalo, ababukele iintaka, abathanda ukukhempisha kunye neengcali zezinambuzane. Misa kwiHomestay yethu ukonwabela amava ohlobo olulodwa kunye noMama weNdalo. Indawo apho ingqondo, umzimba kunye nomphefumlo wakho uya kuphumla kwaye ube yinto enye nendalo. Indlu yethu yangasese yenzelwe wena engqondweni. Silungise igumbi ngalinye, ububele bethu kunye nezinto eziluncedo ukwenza ukuhlala kwakho kube konwabise kwaye kuphumle kangangoko.
Indlu yethu yangasese yenzelwe wena engqondweni. Siyathemba ukuba ingqalelo yethu kwiinkcukacha kunye nomnqweno wokukuchulumancisa uqaqambile ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Sinikezela ngamagumbi amabini eBhedi abanzi kwaye atofotofo ayilelwe ukuba alingane uhlahlo lwabiwo-mali kunye nencasa yakhe nabani na.Siza kubonelela ngokutya kwekhaya kwindawo yethu yokutyela, i-taste buds zakho ziqinisekile ukuba ziya kudanisa ngolonwabo nangaliphi na ixesha lemini.Ukuba ukuphumla sisitayile sakho , qiniseka ukuba uchitha imvakwemini yakho uphumle kwaye uphumle kulonwabo olusulungekileyo kwingca eluhlaza egcinwe kakuhle ejonge kwiMithi eThick Deodar.
Kukho iihambo ezintle kunye neemoto ezizolileyo ezijikeleze iMashobra. Siya kukuvuyela ukukukhokela ngefowuni. Umgama ukusuka kwiindawo zabakhenkethi ungezantsi: I-Naldehra Golf Course - 15 kilometers (malunga ne-8 miles) Kufri - 14 kilometers (malunga ne-7 miles) Mall Road, Shimla - 18 km (malunga ne-9 miles) Tatapani Hot Springs kunye neDam - 45 km (Malunga ne-26.5) imayile)
Hi I am Narender Duhan, I am into education and run an education center in Haryana, Recently I have entered into Hospitality Sector and I am running few properties specifically Homestay in and Around Shimla.
Andisoloko ndikho nangona kunjalo sinomgcini kunye nompheki oqinisekisa ukuba undwendwe oluhlala nathi luhlala lukhululekile . Ndingafumaneka ngomnxeba ngalo naluphi na uncedo .